China GMP FDA Fluidized-bed Jet Mill orinasa sy mpanamboatra | Qiangdi
Jet Mill-fandriana nofonosina
QDF-400 WP Rafitra famokarana mitohy an'ny Jet Mill Ho an'ny 400kg
Rafitra Jet Mill WP – Ampiharo amin'ny saha agrochemical
Rafitra WP-WDG – Ampiharo amin'ny sehatry ny agrochemical
Karazan'olona malaza Jet Mill-bed am-pandriana
Jet Mill Mill-fandriana GMP FDA
Fampiasana manokana ny mill Jet-bed am-pandriana amin'ny fitaovana mafy
Indostrian'ny bateria sy fitaovana simika hafa ampiasaina amin'ny mill-bed am-pandriana
Nitrogen Protection Jet Mill System Ho an'ny fitaovana manokana
Fitaovana mafy mafy Jet Mill
Disc Type (UltrasonicPancake) Jet Mill
Jet Type Jet Type malaza
Laboratoara Fampiasana Jet Mill
Ampiasaina any amin'ny laboratoara Jet Mill-fandriana Jet Mill ho an'ny fahaiza-manao 1-10kg
Fampiasana jet-type Disc-type mill mill QDB-50 QDB-100 QDB-150
Jet Micron Grader Ho an'ny Sorting
Ireo singa ho an'ny Mill Mill
Ireo singa ho an'ny Jet Mil
Vary mihosin-dra mitsangana mametaka LSM
Voninahitra sy fahaizana
Raharaha injeniera mifandraika
Ny tombony sy aorian'ny fivarotana
Panorama an'ny orinasa
Ny milina Fluidized-bed Jet dia fitaovana toy izany izay mampiasa ny haingam-pandeha haingam-pandeha hanatanterahana ilay karazana maintso mahery vaika. Atosiky ny rivotra voahidy, ny akora dia hafafaingana amin'ny fiampitana ny nozera efatra mba ho voadona sy hatosiky ny rivotra miakatra mankany amin'ny faritra fitotoana.
Volavola fananganana jet mill- eo ambanin'ny asan'ny herin'ny centrifugal ny kodiarana fanasokajiana sy ny herin'ny centripetal an'ny mpankafy, ny fitaovana dia lasa fandriana tsiranoka ao anaty milina fitotoam-bary.
Ny vokatra dia pulverizer fandriana mihena miaraka amin'ny rivotra famatrarana ho mpanelanelana. Ny vatan'ny fikosoham-bary dia mizara ho fizarana 3, dia ny faritra fanorotoroana, ny faritra fandefasana ary ny faritra naoty. Ny Grading Area dia omena ny kodiarana fitetezana, ary ny haingam-pandeha dia azo ahitsy amin'ny mpanova. Ny efitrano fanorotoroana dia misy ny banga fanosotra, mpamatsy sakafo sns.
Fitsipika momba ny asa
Ny fitaovana dia miditra ao amin'ny efitrano fanorotoroana amin'ny alàlan'ny feeder material. Ny fantson-drivotra faneriterena ao amin'ny efitrano fanosehana amin'ny hafainganam-pandeha amin'ny alàlan'ny nozotra famotehana efatra izay natao manokana. Ny fitaovana dia mahazo haingam-pandeha amin'ny fikorianan'ny fikorianan'ny ultrasonic ary miverimberina ny fiatraikany sy ny fifandonana ao amin'ny toerana afovoany afovoan'ny efitrano fandringanana mandra-pikatsoany. Ny fitaovana torotoro dia miditra ao amin'ny efitrano fanaovana grady noho ny fiakarana. Satria mihodina amin'ny hafainganam-pandeha haingana ny kodiarana fitetezana, rehefa miakatra ny fitaovana dia ao ambanin'ny hery afovoany noforonina avy amin'ny rotors grading ary koa ny hery centripetal noforonina avy amin'ny viscosity an'ny airflow. Rehefa eo ambanin'ny hery afovoany lehibe kokoa noho ny hery centripetal ireo sombin-javatra ireo dia tsy hiditra ao amin'ny efitranon'ilay kodiarana grama ny poti-javatra marihitra misy savaivony lehibe kokoa noho ireo poti-kaoty ilaina ary hiverina any amin'ilay efitrano fanorotoroana ho potehina. Ireo sombintsombiny tsara izay mifanaraka amin'ny savaivon'ny poti-kaoty ilaina dia hiditra amin'ny kodiarana fitetezana ary hikoriana ao amin'ny Separator Separitor ao amin'ny efitranon'ny kodiarana fitetezana miaraka amin'ny fikorianan'ny rivotra ary angonin'ny mpanangona. Ny rivotra voasivana dia mivoaka avy amin'ny rivotra miditra aorian'ny fitsaboana kitapo sivana.
1.Ny sombiny dia mety hahatratra 0,5-10 micron noho ny hafainganam-pandehan'ny rivotra ary ny herin'ny fiantraikany lehibe.
2. Ireo fitaovana fanasokajiana dia misy ao anatin'ny pulverizer, amin'ny alalàn'ny poti-javatra madinidinika avy amin'ny fitaovana fanodinana azo averina mivezivezy amin'ny bisikileta mba hamokarana vokatra vita miaraka amin'ny fahamendrehan'ny voamadinika sy ny savaivony potika kely.
3. Famolavolana vokatra, fifantenana materialy mifanaraka tanteraka amin'ny fepetra takiana amin'ny GMP / FDA. Tsy misy loto amin'ny fitaovana amin'ny fikosoham-bary.
4.Ny fikorianan'ny rivotra dia madio tanteraka amin'ny fizotry ny sivana. Miorina anaty rafitra mba hanao ny mihidy faribolana. Avy amin'ny akora ka hatramin'ny famokarana tsy tapaka ny vokatra vita, ny fotoana fohy indrindra dia mila fotoana fohy fa manome fahombiazana avo kokoa sy fiasa mitohy.
5.Ny rafitry ny fitaovana dia tsotra, ny anatiny sy ny ivelany voapoizina be, tsy misy zoro maty, mora diovina.
Akanjo 6.Low: satria ny fiantraikan'ny fanorotoroana dia vokatry ny fiatraikany sy ny fifandonana ny sombintsombiny, ny zingan-tongotra haingam-pandeha dia mahalana no mipetaka amin'ny rindrina. Azo ampiharina amin'ny famotehana ilay fitaovana ambanin'ny Moh's Scale 9.
7. Fanaraha-maso sy fanamarinana indostrialy ilaina, toy ny FAT.SAT.DQ.OQ.IQ.PQ.
Famolavolana antsipiriany tonga lafatra ho an'ny fenitra GMP / FDA
1.Loading hopper miaraka amin'ny tombo-kase hisorohana ny vokatra voaloto.
2.Ny motera rehetra miaraka amin'ny satrony mba ho voaro ary hitandrina ny vokatra madio. Volavola matihanina.
3.All fitaovana mifandray amin'ny masinina miaraka amin'ny vokatra dia tsy maintsy vy tsy misy vy, tsy misy zoro maty ary tsy misy loto.
Ny pulverizer pneumatika dia misy ny compressor-n'ny rivotra, ny mpamerina ny solika, ny tobin-tsolika, ny fanamainana mangatsiaka, ny sivana amin'ny rivotra, ny pulverizer pneumatic fandriana mihena, ny mpizarazara amin'ny cyclone, ny mpanangona, ny rivotra miditra ary ny hafa.
Rafitra fanaraha-maso PLC
Ny rafitra dia mampiasa fanaraha-maso efijery manan-tsaina, fandidiana mora ary fanaraha-maso marina. Ity rafitra ity dia mandray ny maodely fanaraha-maso ny efijery PLC +, ny écran dia ny terminal fiasan'ity rafitra ity, noho izany, tena zava-dehibe tokoa izy io.raha ny fahafantarana tsara ny asan'ny lakile rehetra eo amin'ny efijery mikasika ny fiasa mba hiantohana ny fiasan'ity rafitra ity.
Fitaovana sy fampiharana
Mpanelanelana amin'ny fitsaboana
→MEFENAMIC ACID akora avy amin'ny tany 60Mesh ho D90 <5.56um
→ECONAZOLE NITRATE akora avy amin'ny tany 60Mesh ho D90 <6um
→MANGO POWDER akora vita amin'ny tany 70Mesh ho D90 <10um (mety amin'ny sakafo mora tohina.)
→TEPOTRA TEA akora avy amin'ny tany 50Mesh ho D90 <10um
Ampiasaina indrindra amin'ny indostrian'ny fanafody, sakafo ary kosmetika.
Teo aloha: Jet Type Jet Type malaza
Manaraka: Rafitra Jet Mill WP – Ampiharo amin'ny saha agrochemical
Fampiasana manokana ny Mill-bed am-pandriana Jet Mill amin'ny avo H ...
QDF-400 WP Rafitra famokarana mitohy an'ny Jet ...
Rafitra Jet Mill WP – Mihatra amin'ny agrochemical ...
Indostrian'ny bateria sy fitaovana simika hafa aminay ...
No 318, Youde Road, Zone teknolojia avo lenta, Tanàna Kunshan, Jiangsu, Sina
Whatsapp / Wechat / telefaona: